Sandals Royal Bahamian: Cusbooneysiin badan oo loogu talagalay fasaxyada raaxada | Hoteelada & Dalxiisyada
Wararka Caribbean • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Wararka safarka Jamaica • Safar Laus • kale • Qiimeynta dalxiis • Arooska Jacaylka Arooska Malabka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
Sandals Royal Bahamian: Cusbooneysiin badan oo loogu talagalay fasaxyada raaxada
Bogga ugu weyn » posts » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Sandals Royal Bahamian: Cusbooneysiin badan oo loogu talagalay fasaxyada raaxada
Sandals Resorts International (SRI) ayaa maanta ku dhawaaqday balaarin lagu sameynayo dayactirka malaayiin-doolar ee hadda jira ee Sandals Royal Bahamian, hudheelka abaalmarinta ku guuleystay, hudheellada iyo jasiirad gaar loo leeyahay oo ku taal Nassau, Bahamas, iyadoo qorshuhu yahay in dib loo furo Janaayo 27, 2022.
Deegaanno cusub, jasiirad gaar loo leeyahay oo la cusbooneysiiyay, iyo inbadan ayaa lagu wadaa inay bilaabaan xilli ciyaareedka 2022 ee Sandals Royal Bahamian.
Durba waxaa socda horumarinta qolalka caanka ah ee webiga iyo dib u habeyn lagu sameeyay in ka badan 200 qol iyo qolal.
Hada uun la soo bandhigay waa fikrad cusub oo hal abuur leh, Coconut Grove, oo ah goob nasasho oo ballaadhan oo ku fidisa xeebta xeebta bartamaha dalxiiska.
Marka lagu daro qolalka caanka ah ee wabiga ee horay loo shaaciyey iyo dib u habeyn lagu sameeyay in ka badan 200 qol iyo qolal, Sandals Royal Bahamian ayaa daaha ka rogi doona fikrad cusub oo cusub, Qumbaha Grove, aag ballaaran oo lagu nasto oo ku fidiya qulqulka xeebta bartamaha dalxiiska. Goobtan oo ay ku hoos jiraan baabacooyinka qumbaha, goobtan cusub waxay ka muuqan doontaa xiriir deg deg ah goobta loo dalxiis tago ee Caribbean-ka oo ay la socdaan gawaari raashin macmacaan leh, qurux badan leh, fadhiyo nasasho leh, iyo aragtiyo aan culeys lahayn oo xagga badda ah. Dib-u-xusuusin lagu sameeyo jasiirad caan ah oo caan ah, Sandals Cay, oo leh goobo nasasho oo casri ah iyo waayo-aragnimo cusub oo gastronomic ah, ayaa kaabi doonta casriyeynta ugu dambeysa ee dalxiiska. Si aan loogu dhexgalin khibrada martida, goobta dalxiiska ayaa sii xirnaan doonta inta dhismaha socdo oo dib loo furi doono xilli ciyaareedka 2022.
Guuritaanka taariikhda furitaanka laga bilaabo Nofeembar 4th wuxuu ahaa go'aan aad u adag, ”ayuu yiri Guddoomiyaha Fulinta ee SRI Adam Stewart. In kasta oo aan dib u furi karnay inta badan dalxiiska, haddana baahida loo qabo badeecadaha iyo kala-goynta silsiladaha ayaa naga daahaysa awooddeena inaan ku dhammaystirno baaxadda mashruuca. Hoteelkan hoostiisa ha lagu duuduubo ilaa ay gebi ahaanba diyaar u tahay waa waxa saxda ah in la sameeyo. Waxaan ku jirnaa jawi rajo weyn leh oo marka martidayadu yimaadaan, waxay noqon doontaa goob kaaribiyaanka oo degan oo qabow ah taas oo hubaal ah inay mudan tahay in la sugo. ”
Martida leh boos celinta Sandals Royal Bahamian inta lagu guda jiro xiritaanka waxaa la dejin doonaa goobta laga heli karo Sandals Resorts ee ay doortaan oo ay ku jiraan Sandals Emerald Bay oo ku taal Great Exuma martida doonaya inay ku sii hayaan Bahamas Dalxiisyada Sandals waxay qaadan doonaan dhammaan khidmadaha isbeddelka duulimaadyada.
Dalxiisyada Sandals offers waxay bixiyaan laba qof oo jacayl ugu jacayl badan, waayo-aragnimada fasaxa ee raaxada ee Kareebiyaanka. Iyada oo leh 15 goobo xeebeed oo qurux badan Jamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, iyo 16th Goobta u imaanaysa Curacao Guga 2022, Goobaha Dalxiis ee Sandals waxay bixisaa ka-saarisyo ka tayo badan shirkadaha kale ee dalxiis ee meeraha ku yaal. Saxiixa Jacaylka Nest Butler Suites® ee ugu dambeeya asturnaanta iyo adeegga; kalkaaliyeyaal ay tababareen Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ cuntada, hubinta khamriga-shelf-sare, khamri qaali ah, iyo maqaayado qaas ah oo qaali ah; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar khabiir ah PADI®; dhakhso Wi-Fi laga bilaabo xeebta illaa qolka jiifka iyo Kabaha kabaha ee Aroosyada Lahabeyn karo dhammaantood waa kuwo gaar loo leeyahay. Dalxiisyada Sandals waxay u dammaanad qaadayaan martida nabadgelyo maskaxeed laga bilaabo imaatinka iyo bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, Tallaabooyinka caafimaadka iyo nabadgelyada ee shirkadda ee kor loo qaaday ee loogu talagalay in lagu siiyo martida kalsoonida ugu weyn markay ku nasanayaan Kariibiyaanka. Dalxiisyada Sandals waa qeyb ka mid ah qoysaska ay leeyihiin Sandals Resorts International (SRI), oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Xeebaha Dalxiisyada iyo waa shirkadda hoggaamineed ee dhammaan dalxiiska Caribbean-ka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Sandals Resorts Luxury Included® farqiga u dhexeeya, booqo www.sandals.com.